ဘိလပ်မြေအလျားလိုက်ကျီတစ်ခု filter ကို baghouse China Manufacturer
စင်ကြယ်သော-လေကြောင်းစက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေး,ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဖုန်ပစ္စည်းစုဆောင်းခြင်း,မီးဖိုထဲက Bag-filter ကိုဖုန် collector
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: စင်ကြယ်သော-လေကြောင်းစက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေး,ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဖုန်ပစ္စည်းစုဆောင်းခြင်း,မီးဖိုထဲက Bag-filter ကိုဖုန် collector
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဘွိုင်လာဖုန်ကောက်ခံရေး > ဘိလပ်မြေအလျားလိုက်ကျီတစ်ခု filter ကို baghouse
 ဘိလပ်မြေအလျားလိုက်ကျီတစ်ခု filter ကို baghouse
ဘွိုင်လာ dedusting အတှကျအသုံးပွုအဆိုပါ dedusting ပစ္စည်းကိရိယာများစက်မှုမြေမှုန့်စုဆောင်း, အိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း, electrostatic မိုးရွာသွန်းမှုနှင့်စိုစွတ်သောမြေမှုန့်စုဆောင်းပါဝင်သည်။ သို့သော်တစ်ဦးချင်းစီ dedusting နှင့်စင်ကြယ်စေသည့်စနစ်က၎င်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ်။ သင့်လျော်သောမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးအဆောက်အဦများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအမှန်တကယ်အခွအေနေအရသိရသည်ရှေးခယျြထားရပါမည်။ တစ်ဦးကစက်မှုမြေမှုန့်စုဆောင်းများသောအားဖြင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အင်အားစု (ဆွဲငင်အား, inertia အင်အားစုများနှင့် centrifugal အင်အားသုံး) ၏အသုံးပြုမှုကိုအားဖြင့် Airflow ကနေအမှုန်ခွဲထုတ်များအတွက်ကိရိယာကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာဆွဲငင်အားဖြေရှင်းခန်း inertial ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းနှင့်ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းပါဝင်သည်။ အဆိုပါအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်းသည့်ဆလင်ဒါ filter ကိုအိတ်စအောက်ခြေကနေဖုန်ထူဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ filter ကိုပစ္စည်းများ၏ချွေးပေါက်ထဲမှာ, မြေမှုန့် filter ကိုပစ္စည်းအပေါ်ဖမ်းဆီးစုဆောင်းနေပါတယ်။ အဆိုပါ filter ကိုပစ္စည်းကနေတဆင့်သန့်စင်သောလေထုဟာထွက်ပေါက်ကနေဆေးရုံကဆင်းသည်။ အဆိုပါ filter ကိုပစ္စည်းများ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အပ်နှံမြေမှုန့်စက်မှုတုန်ခါမှု၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအောက်ရှိစစ်ထုတ်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်မှဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ပြာရေပုံးထဲသို့ကျစေနိုင်သည်။ ဖုန်မှုန့်သန့်စင်အဆောက်အဦ။ electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု (ESP) ဖုန်မှုန့်အမှုန်စွဲချက်တင်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်လယ်ကိုအင်အားသုံး၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအောက်တွင်စေသည်ဖြစ်သောမြင့်မားသောဗို့အားလျှပ်စစ်လယ်ကွင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဖုန်မှုန့်ဓာတ်ငွေ့ကနေဖုန်မှုန့်အမှုန်ခွဲခြားထားတဲ့မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ မြေမှုန့်မှကွဲကွာကြောင်းသို့မှသာအဆိုပါစိုစွတ်သောမြေမှုန့်စုဆောင်း, အရည် (ယေဘုယျအားဖြင့်ရေ) နဲ့နီးစပ်အဆက်အသွယ်ဖုန်မှုန့်ဓာတ်ငွေ့ကိုမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး, အမှုန်စုဆောင်းဖို့ရေမျက်ရည်စက်လေးတွေနှင့်အမှုန်များ၏ inertial တိုက်မှုသို့မဟုတ်ဓာတုအရေးယူမှုကိုအသုံးပြုသည် ဖုန်မှုန့်ဓါတ်ငွေ့။
ဒါဟာဓာတ်ငွေ့ပမာဏနှင့်ဝန်အလိုက်အထိုက်နေတတ်ကိုင်တွယ်, ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှု, ဖိအားဆုံးရှုံးမှုပါဝင်သည်။
1. မြေမှုန့်ကိုဖယ်ရှား၏ထိရောက်မှုယေဘုယျအားဖြင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအင်ဂျင်နီယာများ၏ဒီဇိုင်းအတွက်အညွှန်းကိန်းအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်, တခါတရံလည်းခွဲခြားထိရောက်မှုဖော်ပြနေသည်။
အဆိုပါ dedusting ထိရောက်မှု, အ ETA21 လျှင်စုစုပေါင်းထိရောက်မှု, မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးစနစ်ပါလျှင် (2) ... အဆိုပါ N ကိုမိုးရွာသွန်းမှုစီးရီးထဲမှာလည်ပတ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ dedusting စနစ်၏စုစုပေါင်းထိရောက်မှု ET အားဖွငျ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ ETA = (1- ETA 1) (1- ETA 2) ၏တွက်ချက်တန်ဖိုး (1- ETA ဎ) ဖြစ်ပါတယ်။
(3) ထိုးဖောက်မှုနှုန်းသည်၏ထိုးဖောက်မှုနှုန်းထွက်ပေါက်အတွက်ဖုန်မှုန့်နှင့်စာနယ်ဇင်းပုံသေနည်းအားဖြင့်ဝင်ပေါက်ဖုန်မှုန့်များ၏စားသုံးမှု၏ဥတု၏ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါသည်: (4) ကိုခွဲခြားထိရောက်မှုဎများအတွက်မြေမှုန့်စုဆောင်း၏ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှုဖြစ်ပါသည် အောက်ပါပုံသေနည်းမှာပြထားတဲ့အတိုင်းတစ်မှုန်အရွယ်အစား: D ဒါမှမဟုတ်အမှုန်အရွယ်အစားအကွာအဝေးမြစ်ဝကျွန်းပေါ်: D,
2. ဖိအားဆုံးရှုံးမှု၏ဆုံးရှုံးမှုကိုမြေမှုန့်စုဆောင်းခြင်းဖြင့်စားသုံးသည့်စက်မှုစွမ်းအင်ကနေတဆင့်ဓါတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုအားဖြင့်တွက်ချက်နိုင်ညွှန်း, မြေမှုန့်စုဆောင်း၏ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်မှာလေထုစီးဆင်းမှု၏စုစုပေါင်းဖိအားရဲ့ absolute value ခြားနားချက် အဆိုပါမိုးရွာသွန်းမှု၏ဒေသခံခုခံကိန်းလူသိများသည်အခါနောက်တစ်နေ့ပုံသေနည်း။ ဒါဟာဖိအားပေးမှု gauge နှင့်အတူ site ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ လတ် p --------- ဖုန်မှုန့် remover ဦး၏သိပ်သည်းဆ ---, သဘာဝဓာတ်ငွေ့၏သိပ်သည်းဆ, ပ, ကီလိုဂရမ် / m3 နှင့်မြေမှုန့်စုဆောင်း၏တံခါးဝအာကာသကောင်းကင်၏အလျင်၏ဖိအားအရှုံး , ဒေါ်။
3. ဓာတ်ငွေ့ deduster နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဓာတ်ငွေ့စွမ်းရည်၏အရွယ်အစားယေဘုယျအားဖြင့် (ကီလိုဂရမ် / ဇသို့မဟုတ်ကီလိုဂရမ် / s) ကိုအသံအတိုးအကျယ်စီးဆင်းမှု (m3 / ဇသို့မဟုတ် m3 / s နဲ့) တွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့်လည်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်စီးဆင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ချက်နဲ့ဝန်များ၏အလိုက်အထိုက်နေတတ်ကောင်းသောအခါဓာတ်ငွေ့များ၏အရေအတွက်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကြီးမားသောအကွာအဝေးအတွင်းမြန်သောအခါ4တည်ငြိမ်သောဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှု, အလယ်အလတ်ဖိအားဆုံးရှုံးမှုနှင့်မြင့်မားသော Operating ထိရောက်မှုနေဆဲကျင်းပနိုင်ပါသည်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: စင်ကြယ်သော-လေကြောင်းစက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေး , ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဖုန်ပစ္စည်းစုဆောင်းခြင်း , မီးဖိုထဲက Bag-filter ကိုဖုန် collector , လက်ကားဈေးနှုန်းစက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေး , မြင့်မားသောအပူချိန်သံမဏိဖုန်ကောက်ခံရေး , မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဖုန်ကောက်ခံရေး , မြင့်မားသောစွမ်းရည်စိုစွတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး , မြင့်မားသောစွမ်းရည် Pulse ဖုန်ကောက်ခံရေး